सत्याग्रहको जन्म- विविधा - कान्तिपुर समाचार
त्यसपछि ‘शत्रुको निगाहमा पाएको जीवनको के काम ?’ भन्दै दुर्योधन पनि अन्नजल त्यागेर मृत्यु वरण गर्न तयार भयो ।
चैत्र १४, २०७७ शरच्चन्द्र वस्ती
कोरोनाको उत्पात अलिक मत्थर भएको मौका छोपेर गुजरात घुम्न गएको थिएँ । पोरबन्दर शहरका सडक चहार्दै थिएँ, अकस्मात् पानी दर्कन थाल्यो । हतारहतार एउटा दोकानमा ओत लागें । ‘सेकेन्डह्यान्ड’ पुस्तक बेच्ने पुरानो दोकान रहेछ, पछिल्लो भागमा थोत्रा पुस्तक र ढुसी परेका फाइलहरूको डंगुर थुपारिएको ।
हेर्दै जाँदा अँध्यारो कुनामा एउटा मक्किइसकेको डायरी फेला पारें, सन् १९३८ मा लेखिएको । ‘माखनलाल खुशहालचन्द (एमके) गान्धी’ नामक सज्जनको त्यो डायरी पल्टाउँदा एउटा पत्र फेला पर्‍यो, जो उनकै जस्तो छोटकरी नाम भएका अर्का कुनै ‘एमके गान्धी’ ले लेखेका रहेछन् । पत्रसहितको त्यो डायरी दोकानदारले तीन रुपैयाँ लिएर मलाई सुम्पिदियो ।
डायरी त मैले पढ्न भ्याएको छैन, तर पत्र पढें । त्यसका प्रापक र प्रेषक एमके गान्धीहरू को हुन्, मलाई थाहा छैन । तर पत्र निकै रोचक रहेछ । त्यसमा सत्याग्रहबारे र खास गरी अनशनलाई किन सत्याग्रह भन्न थालियो भन्ने खुलासा गरिएको रहेछ । ८० वर्ष पुरानो त्यो पत्र तपाईंलाई पनि रोचक लाग्ला भन्ठानेर, नेपालीमा अनुवाद गरी यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेको छु । पत्रमाथि मेरो कुनै टिप्पणी छैन । आगे तपाईंको मर्जी ।
सत्याग्रहको विचार मेरो मनमा कसरी जन्म्यो भनेर तिमीले सोधी पठाएका रहेछौ । तिम्रो जिज्ञासा रहेछ, ‘अवज्ञा, असहयोग, धर्ना, जुलूस, प्रदर्शन आदिको कुरा बेग्लै हो, तर सत्याग्रहको नाममा आफ्नो माग पूरा गराउन अनशन बस्ने विचार तपाईंको मनमा कसरी उत्पन्न भयो ? यसको प्रेरणा कसबाट पाउनुभयो ?’ तिमी मेरा नातेदार पनि हौ र यसबखत म तिम्रै शहरमा छु । भेटेर सोधेको भए विस्तारपूर्वक बताउँथें । पत्र पठाएकाले पत्रबाटै संक्षेपमा जवाफ दिंदैछु ।
सत्याग्रह शब्द अवश्य नयाँ हो र यस अन्तर्गत आफ्ना माग पूरा गराउन मैले अनशन पनि गर्दै आएको छु । तर, मेरो विचारमा यो कुनै नयाँ ‘विचार’ होइन, जुन मेरो मन–मस्तिष्कमा जन्मेको होस् । मलाई लाग्छ, हामी सबैले यसको प्रयोग आफ्नो जीवनमा जरूर गरेका छौं, खास गरी बाल्यकालमा । हामी मात्र किन, हाम्रा पुर्खा र तिनका पनि पुर्खाले समेत यसको प्रयोग गर्दै आएका हुन् । यसो सम्झिहेर त, केही चाहियो र आमाबाबुले दिएनन् भने हामी के गर्थ्यौं ? कराउँथ्यौं, रोड्याइँ गर्थ्यौं, भुइँमा लडीबुडी गरेर रालसिंगान बगाउँदै क्वाँ क्वाँ रुन्थ्यौं र त्यतिले पनि भएन भने खाना खाँदैनथ्यौं । अनि आमाबाबुले हाम्रो माग पूरा गरिदिन्थे । सत्याग्रह त्यही होइन ?
एउटा कुरा चाहिं नबिर्स है । मैले ‘आमाबाबु’ भनें । तर सत्य के हो भने, हाम्रो सत्याग्रह पिताजीका सामु भन्दा माताजीका सामु बढी सफल हुन्थ्यो । पिताजी त ‘चूप लाग्’ भनेर हप्काइहाल्नुहुन्थ्यो र नमाने चड्काइहाल्नुहुन्थ्यो । माताजीको मन चाहिं कमलो हुन्थ्यो । हामी रोएर भुइँमा पसारिएपछि र अझ एक छाक खाना नखाएपछि उहाँको मन पग्लिहाल्थ्यो र हाम्रो माग पूरा भइहाल्थ्यो । होइन त ?
परन्तु, जन्मजात रूपमा मानिसमा रहेको यो प्रवृत्ति ऊ हुर्कंदै जाँदा हराउँदै जाँदो रहेछ । आफ्नो कुरा मनाउन कसैका सामु खान–पिउन छोडेर पसारिनु सारै निर्घृणी काम हो भन्ने लाग्दो रहेछ । मलाई पनि यस्तै भयो । त्यसमाथि, दश वर्षकै उमेरमा मैले पण्डितजीका मुखबाट रामायण र महाभारतको कथा सुन्ने मौका पाएँ । रामायणमा वालीको छोरो अंगदले निर्धारित समयमा सीतालाई खोज्न नसकेपछि अनशन गरेर प्राण त्याग्न खोजेको रहेछ । महाभारतमा दुर्योधनको कथा झन् रमाइलो रहेछ । वनवास पठाइएका पाण्डवहरूको उपहास गर्न भनेर ऊ आफ्ना दासदासीहरू, रानीहरू, मन्त्रीहरू, योद्धाहरू र सेनासहित द्वैतवन पुगेछ । त्यहाँ चित्रसेन गन्धर्वसँग लडाइँ पर्दा उनले दुर्योधनलाई बन्दी बनाएछन् र युधिष्ठिरको अनुरोधमा प्राणदान दिएर मुक्त गरेछन् । त्यसपछि ‘शत्रुको निगाहमा पाएको जीवनको के अर्थ ?’ भन्दै दुर्योधनले पनि अन्नजल त्यागेर मृत्यु वरण गर्न खोजेको रहेछ । यसबाट मैले अनशन भन्ने कुरो कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने र हुती नभएकाहरूले आफ्नो जिन्दगीको भारी बिसाउन अपनाउने तुच्छ प्रक्रिया रहेछ भन्ने बुझें र अनशनलाई घृणाको दृष्टिले हेर्न थालें ।
त्यस्तो मान्छे म, घरीघरी अनशन बसिहिंड्ने ‘अनशनप्रेमी’ कसरी हुन पुगें भनेर तिमीलाई अचम्म लागिरहेको होला । अनशनप्रतिको मेरो त्यो धारणा धेरै दिन टिकेन । तिमीलाई के ढाँट्नु ? म आज तिम्रा सामु आजसम्म कसैलाई नखोलेको त्यो रहस्य उद्घाटन गर्दैछु, जसबारे मेरो आत्मकथा पनि मौन छ । कसरी मैले अनशनको शक्ति र यसको उपयोगिता थाहा पाएँ, यसलाई प्रेम गर्न थालें, अनि कसबाट यसको प्रेरणा पाएँ, आज सबै बताउँछु ।
तिमीलाई थाहै छ, हाम्रो खानदानमा पुरुषहरूकै हालीमुहाली थियो । पिताजी, काका, बडाबाहरू आआफ्नो परिवारका मुखिया हुनुहुन्थ्यो । कस्तो खाने, कस्तो लगाउने, कस्तो घरमा बस्नेदेखि कहाँ जाने, कहाँ नजाने, कोसँग सम्बन्ध गाँस्नेसम्मका हरेक कुरामा उहाँहरूको निर्णय सर्वोपरि हुन्थ्यो । आमा, काकी, बडीआमा, फुपूहरू चित्त नबुझे पनि केही बोल्नुहुन्नथ्यो । उहाँहरूको कुरा कसले सुनोस् ?
तर, सँगै घर भएका हरिलाल काका र कमला काकीको कुरा बेग्लै थियो । काका सरकारी अफिसर हुनुहुन्थ्यो । पहलमान जस्तो हट्टाकट्टा जीउको धनी । समाजमा ठूलो इज्जत र धाकधक्कू थियो । काकी भने फुकिढल र निरक्षर समेत हुनुहुन्थ्यो । बाहिरबाट हेर्दा काका नै सर्वेसर्वा देखिए पनि घरभित्र उहाँको केही चल्दैनथ्यो । हरेक निर्णय काकीले चाहे अनुसार नै हुन्थ्यो । काकालाई फकाएर, माया गरेर, लाडे पल्टेर, स्वाङ पारेर, ठुस्किएर, तर्साएर होस् अथवा मर्छु, सेरिन्छु, समुद्रमा फाल हान्छु, जोगिनी बनेर हिंड्छु भन्दै घुर्क्याएर होस्, आफ्नो कुरा मनाइछाड्नुहुन्थ्यो । काका फन्कनुहुन्थ्यो, झ्वाँक्किनुहुन्थ्यो, भर्‍याङमा जुत्ता बजाउँदै तलमाथि गर्नुहुन्थ्यो, दारा किट्तै आफ्नो कपाल आफैं भुत्ल्याउनुहुन्थ्यो, तर अन्ततः काकीको कुरा मान्न बाध्य हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँहरूकी एउटी छोरी थिई— ममताबाई । हरिलाल काका उसको बिहा आफ्नो साथीको उच्च शिक्षित छोरासँग गरिदिन चाहनुहुन्थ्यो र उसलाई वचन पनि दिइसक्नुभएको थियो । कमला काकीको जोड भने खासै नपढेको तर माइतीतिरबाट नाता पर्ने अर्को केटामा थियो । दुवै जना आफ्नो कुरामा अडिग हुनुहुन्थ्यो । महीनौंसम्म सल्लाह नमिलेपछि एक दिन काकाले घोषणा गर्नुभएछ, ‘तँ जेसुकै भन्, म छोरीको बिहा मैले भनेकै ठाउँमा गरिदिन्छु ।’ काकीले सधैं झैं फकाउने, ठुस्किने, घुर्क्याउने सारा उपाय अपनाउँदा पनि काकाले वास्ता गर्नुभएनछ । त्यसपछि काकीले आफ्नो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्नुभयो— खान छोडेर बसिदिनुभयो । अब काकालाई आपत पर्‍यो । जति गाली गरे पनि काकीलाई फरक नपर्ने, कुटौं–पिटौं भने अरूले थाहा पाउलान् र आफ्नै इज्जत जाला भन्ने डर । तीन दिनसम्म त ‘नखाए नखा, छोरी त मैले भनेकै केटालाई दिन्छु’ भनेर अडिनुभयो । तर चौथो दिन काकी भोकले बेहोश भएर लडेपछि उहाँले हार मान्नुभयो । काकीकै जीत भयो ।
यस्तो चटक कमला काकी पहिले पनि गरिरहनुहुन्थ्यो, तर यही घटनाले मेरो ज्ञानचक्षु खुल्यो र मैले अनशनलाई आफ्नो माग पूरा गराउने सबैभन्दा ठूलो हतियार बनाउने निर्णय गरें । यसका लागि मेरो गुरु र प्रेरणास्रोत कमला काकी नै हुनुहुन्छ । म उहाँलाई र उहाँ मार्फत समस्त मातृजातिलाई शत–शत प्रणाम गर्छु । सत्याग्रहका नाममा गरिने धर्ना, प्रदर्शन आदि सेरोफेरोका गतिविधि मात्र हुन्— यसको केन्द्रविन्दु त आमरण अनशन नै हो । मलाई लाग्छ, पछि गएर मानिसले ‘सत्याग्रह’ भन्दा यसैलाई बुझ्नेछन् । यो ब्रहृमास्त्र आजसम्म कहिल्यै असफल भएको छैन ।
यसैसँग जोडिएको अर्को घटना उल्लेख नगर्ने हो भने सत्याग्रहको चर्चा अधूरो हुनेछ । कमला काकीको बहादुरीको बयान सुनेपछि रामु धोबीकी जोई जानकीले पनि उहाँको तरकीब आजमाइश गर्ने विचार गरिछ । नयाँ सारी किनिदे भन्दा रामुले दुई महीनादेखि टेरपुच्छर लगाएको रहेनछ । एक दिन जानकीले त्यसैलाई निहुँ बनाएर खाना खान छोडिछ । रामु, ‘नखाए मर् त’ भन्दै पाकेको खाएर सुतेछ । ऊ पाँच दिन अनशन बसिछ, तर पार लागेनछ । ‘नखाएर मलाई घुर्क्याउने ?’ भन्दै रामु हरेक दिन लात्तैलात्ताले भकुर्दो रहेछ । ऊ कंकलाशब्द गरेर रुँदी रहिछ । छिमेकीहरू तमाशा हेर्न बराम लाग्दा रहेछन् । तर रामुलाई त्यसको के मतलब ? केही नलागेपछि जानकीले छैटौं दिन रुँदै अनशन तोडिछ ।
यसबाट मैले के बुझें भने, जो अलिकति सभ्य छ र लोकलाजको डर मान्छ, सत्याग्रहको हतियार उसका सामु मात्र काम लाग्छ । जो असभ्य छ, क्रूर र निर्लज्ज छ, उसका सामु सत्याग्रह गर्नु भनेको आफ्नो दुर्भाग्य आफैं निम्त्याउनु हो । अहिले जर्मनीमा हिटलर र रूसमा स्टालिनको शासन छ । त्यहाँ सत्याग्रहले काम गर्छ त ? गर्दैन । किनभने ती रामु धोबी जस्तै हुन् । भारतमा चाहिं यसले काम गर्छ । किनभने अंग्रेज भनेका हरिदास काका जस्तै हुन् ।
पत्रमा तिमीले सत्याग्रहसँग जोडिएका केही गम्भीर नैतिक पक्षबारे पनि प्रश्न उठाएका रहेछौ । तिम्रा प्रश्न जायज छन्, तिनको उत्तर पछि कुनै वेला दिउँला । आजलाई यत्तिमा विदा लिन्छु ।
— एमके गान्धी
प्रकाशित : चैत्र १४, २०७७ ०९:५४
पदाधिकारी नियुक्ति नभई हामी केही गर्न सक्दैनौं– तोयनारायण सुवेदी - प्रवक्ता, लोक सेवा आयोग
चैत्र १४, २०७७ ऋषिराम पौड्याल
लोक सेवाले असोजबाट प्रत्येक महिना पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार कोरोना महामारी र अदालतबाट रिट परेका कारण विज्ञापन सार्वजनिक गरिए पनि पदपूर्तिका लागि परीक्षा हुन सकेको छैन । चालु वर्षको अन्तिम विज्ञापन यही महिनाको अन्तिम बुधबार गर्ने योजना छ । आगामी साता गर्ने प्राविधिकतर्फको पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापनको तयारी पहिले नै गरिसकिएको छ । कोरोना महामारीका कारण प्राविधिकको पदपूर्ति गत साल पनि भएको थिएन ।
चालु वर्षको कार्यसूचीअनुसार प्रशासनिक र प्राविधिकतर्फ तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । तिनको लिखित परीक्षा भने सुरु हुन सकेको छैन । लिखित, मौखिकलगायत सबै परीक्षा सकेर कर्मचारी छनोट गर्न झन्डै चार महिना लाग्ने लोक सेवाका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘चालु वर्षको विज्ञापनअनुसार पदपूर्तिका लागि अदालती रिट किनारा लागेको छ तर परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाउने समयमा लोक सेवा पूरा खाली भयो,’ सुवेदीले भने, ‘अब पदाधिकारीको नियुक्ति नभई हामी केही गर्न सक्दैनौं ।’
संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको समयवाधि समाप्त हुनु एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले सिर्जित राजनीतिक तरंग र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले दलहरूबीच चुलिएको तिक्तताले पदाधिकारी सिफारिस हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहितका दलहरूले परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिने सूचना संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । उक्त अध्यादेश गत फागुन २३ मा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले पेस गरेका छन् ।
के–के रोकिन्छ ?
विज्ञापन प्रकाशित, लिखित, मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, बढुवा प्रक्रिया, आयोगको परामर्श, विज्ञ छनोट जस्ता सबै प्रक्रिया लोक सेवाका पदाधिकारीबिना गर्न मिल्दैन । परीक्षाको प्रश्नपत्रको तयारीका लागि विज्ञको छनोट रोकिएको छ । विभिन्न बढुवा समितिमा लोक सेवाका अध्यक्ष वा सदस्यले अध्यक्षता गर्ने वा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ ।
लोक सेवाले परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूको नामावली सिफारिस गर्नुपर्छ । सचिव बढुवाका लागि बढुवा समितिको अध्यक्षता लोक सेवा अध्यक्षले गर्नुपर्छ । सहसचिव र उपसचिवको बढुवामा लोक सेवा सदस्यले अध्यक्षता गर्ने प्रावधान रहेको छ । अन्तर्वार्तामा बस्ने प्रतिनिधि पनि पदाधिकारीबिना पठाउन सकिँदैन ।
प्रकाशित : चैत्र १४, २०७७ ०९:४४